Wararka Maanta: Jimco, July 2 , 2021-Baarlamaanka Carabta oo war kasoo saaray arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya
Wararka Maanta- Jimco, July 2 , 2021
Baarlamaanka Carabta oo war kasoo saaray arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Baarlamaanka Carabta ayaa soo dhaweeyay go'aankii dhawaan kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya ee ku saabsanaa jadwalka doorashooyinka dalka Soomaaliya.
7/2/2021 11:38 AM EST
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Qaraxaan oo ah mid Ismiidaamin ah ayaa la sheegay inuu ka dhacay goob Maqaaxi ah oo ku taala Isgoyska Jubba ee magaalada Muqdisho, kasoo jugtiisa laga maqlay degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Banaadir.
Guddiga doorashada dalka oo guddoomiye ku meel gaar ah doortay
7/2/2021 8:42 AM EST
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Kulan aay maanta isugu yimaadeen guddiga hirgilinta doorashooyinka dalka ee heer Fedaraal ayaa waxay guddoomiye si kumeel gaar ah u doorteen Muuse Geelle Yuusuf.
Komiishanka xuquuqal insaanka Somaliland oo war kasoo saaray hablo ku xidhan Gabilay
7/2/2021 7:11 AM EST
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Komishanka xuquuqal insaanka Somaliland, ayaa walaac kamujiyay xaalada 35 hablood, oo loo xidhay in ay calanka Soomaaliya qaateen.
Dowladda Maraykanka oo shaacisay in ciidamo Soomaaliya u dirtay Eritrea ay gudaha u galeen dalka Ethiopia
7/2/2021 5:13 AM EST
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Ciidamo Soomaaliya ay u dirtay Eritrea ayaa gudaha u galay dalka Itoobiya, sida uu sheegay Robert F. Godec, oo ah sii hayaha ku xigeenka xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka.
7/2/2021 2:30 AM EST
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Mustafe Maxamed Cumar Cagjar ayaa sheegay ineysan marnaba u dulqaadan doonin shaqsiyaadka uu sheegay iney la shaqeeyaan ama taageeraan Ururka TPLF, ee ka dhex dagaalama gudaha dalka Itoobiya.
7/2/2021 1:37 AM EST
Jimco, Luulyo 2, 2021 (HOL) - Howlgalo isbaaro qaadis ah oo aay si wadajir ah u sameyeen ciidamada Daraawiishta maamulka Koofur Galbeed iyo kuwa Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa laga fuliyay wadada xariirisa Muqdisho iyo Baydhabo.
Death toll rises to 10 in suicide bombing -HOL
7/2/2021 7:34 PM EST
UK renews charcoal ban from Somalia -HOL
7/2/2021 7:51 AM EST
MOGADISHU (HOL) - The UK has reaffirmed its sanctions on charcoal imports from Somalia warning of prison sentences for violations.
Ethiopia says Tigray ceasefire a work in progress amid fears of famine -Reuters
7/2/2021 1:01 AM EST
US issues warning to aircrafts in Tigray -Daily Nation
7/2/2021 12:57 AM EST
Divisions over peace operations and ad-hoc security approaches could be the UN–AU partnership’s undoing -ISS
7/2/2021 12:50 AM EST
U.S. adds Turkey to list of countries implicated in use of child soldiers -Reuters
7/2/2021 12:44 AM EST
'Mogadishu' director captures drama, thrills behind true story -Yonhap
7/2/2021 12:43 AM EST
Farmaajo calls for national unity as Somalia marks Independence Day -The East African
7/2/2021 12:40 AM EST
'Turkey could play vital role in ensuring peace in Afghanistan' -Daily Sabah
7/2/2021 12:32 AM EST
Army Upgrades 60 Awards for 'Black Hawk Down' Battle -Military
7/2/2021 12:27 AM EST